လက်ရှိတွင် Uv လက်သည်းဆိုးဆေး ဂျယ်လ်ဆိုးဆေးများသည် လူငယ်များအတွက် ဖက်ရှင်ကို အထူးကြိုက်နှစ်သက်သူ ပိုများလာသောကြောင့် အလားအလာရှိသော ဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုရှိသည်။ လူငယ်တွေက ကုန်စည် မျိုးစုံအတွက် အဓိက စျေးကွက်ပဲ၊ လူငယ်တွေ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဈေးကွက်က ကြီးတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လက်သည်းဂျယ်အဖြစ် ရောင်စုံလှပမှုအသစ်...
UV လက်သည်းဆိုးဆေး လက်ကားရောင်းသူ
21-11-20 ရက်နေ့တွင် admin မှ
လက်သည်းဆိုးဆေး ထုတ်ကုန်များသည် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင် ရေပန်းစားလျက်ရှိပြီး ၎င်းသည် အလွန်ကြီးမားသော အလားအလာရှိသော စျေးကွက်တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့် လက်ရှိတွင် ဤလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ ပိုများလာပါသည်။ Newcolorbeauty သည် 2010 ခုနှစ်မှစတင်၍ လက်သည်း UV gel polish ထုတ်ကုန်များအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး လက်သည်းဂျယ်လိမ်းဆေးများကို cl...
New Color Beauty - UV လက်သည်းဂျယ်ဆေး ထုတ်ကုန်များအတွက် ကျွမ်းကျင်ထုတ်လုပ်သူ OEM ထုတ်လုပ်မှု၊ အများအားဖြင့် OEM (ထုတ်လုပ်မှု) ဆိုသည်မှာ အခြေခံအားဖြင့် အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူများသည် ထုတ်ကုန်များကို တိုက်ရိုက်မထုတ်လုပ်သော်လည်း ၎င်းတို့ကျွမ်းကျင်သော အဓိကနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ထုတ်ကုန်အသစ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ ဆားကိုထိန်းပါ...
21-11-06 တွင် admin မှ
A. လက်သည်းဆိုးဆေးတံဆိပ်အလွှာရှိ အက်ကြောင်းများ- အကြောင်းရင်းများနှင့် ဖြေရှင်းနည်းများ- UV gel လက်သည်းဆိုးဆေး ပြီးပါက 1-2 ရက်အတွင်း အက်ကြောင်းများ ပေါ်လာတတ်သည်။ ကောင်းစွာမကိုင်တွယ်ပါက အလုံပိတ်အလွှာ အက်ကွဲသွားပြီး အမှုန်အမွှားများ ထွက်လာသည်အထိ အက်ကြောင်းများ တဖြည်းဖြည်း တိုးလာပါမည်။ အဓိကအကြောင်းအရင်းကတော့...
UV gel လက်သည်းဆိုးဆေးများကို စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် လက်ကားရောင်းချပေးပါသည်။
21-10-30 ရက်နေ့တွင် admin မှ
New color beauty သည် R&D၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီသော ဂျယ်လက်သည်းဆိုးဆေး ထုတ်လုပ်မှု အခြေခံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါစက်ရုံကို 2010 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး စက်ရုံဧရိယာသည် စတုရန်းမီတာ 12,000 ခန့်ရှိသည်။ အလှကုန်ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ လက်သည်းဆိုးဆေးစက်ရုံများ၏ ပထမအသုတ်ဖြစ်သည်။
top coat gel မပါဘဲ လက်သည်းပန်းချီလုပ်ရတာ အဆင်ပြေလား ။
manicure လုပ်ပြီးရင် top coat gel မလိမ်းဘဲနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ လက်သည်းပန်းချီကို top coat gel နဲ့တွဲသုံးဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲ မလိုအပ်ပေမယ့် လက်သည်းပန်းချီကို ပိုကြာရှည်ခံပြီး လှပချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဆင့်တိုင်းကို ချန်ထားလို့မရပါဘူး။ အပေါ်ဆုံးကုတ်ဂျယ်အလွှာက လက်သည်းတွေကို ကြာရှည်ကြာကြာခံစေပြီး အလွယ်တကူ ခြစ်မိမှာမဟုတ်ပါဘူး...
Gel Nail ထုတ်လုပ်သူသည် gel polish ဖြင့် လက်သည်းပန်းချီကို မည်ကဲ့သို့ အာရုံစိုက်ရမည်ကို သင်ပြသနေပါသလား။
21-10-16 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ဆောင်းရာသီမှာ သင့်လက်သည်းပေါ် လက်သည်းဆိုးဆေးကို ဂရုစိုက်ပါ ။ အရောင်သစ် အလှတရား - ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဂျယ်လက်သည်းကို UV ဆိုးဆေး ပေးသွင်းသူ မှ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်- 1. လက်သည်းခွံသည် အလွန်ရှည်သင့်သည်; 2. လက်သည်းအမြစ်၏အရေပြားကို မကြာခဏ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ 3. လက်သည်းဆိုးဆေးသည် ပါးလွှာသည်။ 4. Fren နဲ့လုပ်ရင်...
လက်သည်းအလှပြင်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုလက်သည်း UV ဂျယ်လ်ဆိုးဆေးကို အကြံပြုထားပါသလဲ။
Nail art UV gel Nail art gel သည် လက်သည်းဆိုးဆေးဂျယ်ဟုလည်းလူသိများသော ဂျယ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး လက်သည်းပန်းချီလုပ်ငန်းတွင် အသုံးများသော ဂျယ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ လက်သည်းဆိုးဆေးဂျယ်ကို အလင်းရောင်ဖြင့် ကုသနိုင်သောကြောင့် လက်သည်းဆိုးဆေးပုလင်းများအားလုံးသည် အလင်းဒဏ်ခံနိုင်သော အပြင်ဘက်ထုပ်ပိုးမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရောင်စုံ၊ ရောင်စုံ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကင်းစင်သော သတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ...
လက်သည်းဆိုးဆေးနှင့် လက်သည်း UV ဂျယ်ဆေးကြား ကွာခြားချက်
ယနေ့ခေတ်တွင် လက်သည်းပန်းချီကို အာရုံစိုက်လာကြပြီး လက်သည်းအလှပြင်ပစ္စည်းများကိုလည်း အဆင့်မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။ သို့သော်လည်း လက်သည်းပန်းချီချစ်သူအများစုအတွက် လက်သည်းဆိုးဆေးနှင့် လက်သည်းဆိုးဆေးများသည် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းသာ ကွဲပြားသော်လည်း ခွဲခြား၍မရပေ။ ဒါပေမယ့် ကွာခြားချက်က မိုင်ထောင်ချီဝေးတယ်။ ထားပါတော့...
21-09-25 ရက်နေ့တွင် admin မှ
NEW COLOR BEAUTY သည် လက်သည်းဆိုးဆေးအခြေခံပစ္စည်းများ၊ အရောင်တင်များနှင့် ဓာတုကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများတွင် အဓိကပါဝင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ စေ့စပ်သေချာစွာ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် စေ့စပ်သေချာသော လက်ရာများ အပြီးတွင်၊ NEW COLOR BEAUTY သည် အကြီးမားဆုံး လက်သည်းဆိုးဆေး အခြေခံပစ္စည်း ထုတ်ကုန်အဖြစ်သို့ တဖြည်းဖြည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။
အမျိုးသမီးများသည် လက်သည်းခြေသည်းများအတွက် ငွေကြေးပိုမိုသုံးစွဲရန် ဆန္ဒရှိကြပြီး လက်သည်းလိမ်းဆေးဈေးကွက်သည် 2024 ခုနှစ်တွင် ယွမ် 90 ဘီလီယံကျော်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးအဖွဲ့၏ ၀ယ်လိုအားနှင့် သုံးစွဲမှုအဆင့်မြှင့်တင်မှု လမ်းကြောင်းသည် အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အလှကုန်နယ်ပယ်တွင်သာမက ဂျယ်လက်သည်းဆိုးဆေးလုပ်ငန်း၏ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်း အားပေးအားမြှောက်ပြုပါသည်။ မကြာသေးမီက လန်ဒန်ရှိ စက်မှုသတင်းအချက်အလက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် ReportByuer...
ကောင်းမွန်တဲ့ UV လက်သည်းဆိုးဆေးတွေကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
လက်သည်းပန်းချီလုပ်ငန်းရှိလူများသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော လက်သည်းဆိုးဆေးဂျယ်လ်သည် လက်သည်းပန်းချီနည်းပညာနှင့် တူညီကြောင်းသိကြသော်လည်း လက်သည်းဆေးကော်သည် လက်သည်းပန်းချီဆိုင်များကဲ့သို့ မညီမညာဖြစ်နေသောကြောင့် လက်သည်းပန်းချီဆိုင်များတွင် ရွေးချယ်စရာများရှိလာပါသည်။ ဒါဆို ဘယ်လို လက်သည်း UV gel က ကောင်းလဲ? လက်သည်း ဂျယ် တံဆိပ် တော်တော်များများ သုံးကြတယ်...
123456 နောက်တစ်ခု > >> စာမျက်နှာ ၁/၇